zimra: Top Zimbabwe News - NewsHub
1-10 results from 410 for query «zimra»
A 51 year old man was arraigned before the courts after allegedly duping a doctor of $21 000 in a botched housing stand deal. Jametias Kudzai Zvinowanda of Mufakose was not asked to plead when he appeared before Harare magistrate Victoria Mashamba charged with fraud. Mashamba denied Zvinowanda bail and remanded him in custody to January 9. Prosecuting 27
The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) has thrown a lifeline to private motor vehicle buyers who paid for car imports on or before November 22, 2018, exempting them from mandatory duty in foreign currency. The revenue collector said individuals who imported vehicles on or before November 22, and whose cars are scheduled to arrive in Zimbabwe on or before 34
November 13, 2018 4:40 PM Peruvian jailed 10 years for cocaine possession
A Peruvian man who was caught with a kilogramme of cocaine at the Robert Mugabe International Airport in September has been slapped with a 10 year jail term. Wilmer Tarazona Aro was convicted on his own plea of guilty for unlawfully dealing in dangerous drugs by Harare magistrate Rumbidai Mugwagwa. Mugwagwa sentenced Aro to an effective 5-10 years jail term and ordered 22
A whistleblower who assisted the Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) recover $18 million tax from a local mobile network service provider through a tip off, has taken the taxman to court claiming his 10 percent commission. The man (name withheld) supplied information that NetOne was flouting tax obligations, resulting in ZIMRA recovering $18 913 694 from the communication 33
September 22, 2018 11:51 AM Zimra official ‘steals’ impounded goods
A 41 year old Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) official stationed at Beitbridge Border Post has been dragged to court for stealing goods which had been confiscated by the revenue authority from a suspected smuggler. Owen Chiparausha of 2704 Dulivhadzimo in the border town is no stranger to crime as he was recently released from prison on bail pending 22
August 14, 2018 12:27 PM Zimra relocates Gweru offices
The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) has advised its clients of disruptions in normal service delivery during relocation of their Gweru offices. Initially Zimra Gweru offices were located at the city’s government complex and will now be moving into Megawatt complex. “Zimra Gweru office is relocating from the government complex to Megawatt complex with effect 19
July 20, 2018 10:50 AM Two Zimra officials acquitted
Two Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) officials who were recently dragged to court for allegedly facilitating the smuggling of roofing material worth $8 535 in import duty after demanding a R2 000 from a truck driver have been cleared of any wrongdoing. Wisdom Matsekedza (35) and Muchineripi Hokonya (32) were found not guilty and acquitted by Beitbridge 23
July 19, 2018 7:31 AM Zimra speaks on board fees
The 9 percent jump in fees and allowances for Zimbabwe Revenue Authority board members for the year to December 31 last year, has been attributed to the high number of meetings held to tackle pressing issues raised in the forensic audit. The forensic audit report unearthed high levels of sleaze that allegedly characterised former Commissioner General 66